5 Kuhle Day Uhambo Kusukela Amsterdam ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Kuhle Day Uhambo Kusukela Amsterdam ngu zemininingwane
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 25/01/2021)
Amsterdam yidolobha elihle ukuvakashelwa. Nakhu kangaka ukubona wenze lapha ukuthi cishe ngeke uthole nesithukuthezi. Nokho, nalokho bekusayoba omkhulu ukuxubanisa izinto. Lokho kungenxa yokuthi Amsterdam kuyinto enkulu yekucala eziningana ezimangalisayo usuku uhambo.
Ngakho, uma ufuna ukuya ku ezinye zezindawo ezingcono kakhulu usuku uhambo kusukela Amsterdam, kufanele ukhethe endaweni efanele. Kulesi sihloko, sizobe ingaphezulu emihlanu ngosuku uhambo ungathatha kusukela Amsterdam. Futhi, sizokunikeza yonke ulwazi oludingayo futhi kanjani ukufinyelela lezi zindawo ngesitimela. Lwathi luphela ucezu, kuzodingeka konke okudingayo ukuze uqale sesiphila Amazing kusukela Amsterdam!
1. London: Omunye Of Okungcono Kunakho Konke Day Uhambo Kusukela Amsterdam!
Lapho usacabanga ukuthi bathathe uhambo namuhla kusukela Amsterdam, abantu abaningi baya lutho kule ndawo. Yini efika engqondweni yakho Amadolobha eNetherlands, Belgium, futhi mhlawumbe Germany. Nokho, akuvamile anqume ukuya eLondon.
Ngokubona kwethu, lokhu ngenye yezinkampani ezingcono kakhulu kakhulu usuku uhambo kusukela Amsterdam ungathatha. Kungani? Lokhu kungenxa yokuthi kaningi lolu hambo suku ukunganakwa. Ngenxa yaleso sizathu, ungaba engavamile ngaphandle kokuphazanyiswa izivakashi eziningi kakhulu kuminyanise isikhala sakho.
On top of ukuthi, London yidolobha omkhulu nge izinto eziningi Kuvusa amadlingozi ukubona wenze. plus, ligcwele umlando kanye izakhiwo ezimangalisayo. Uma kungenjalo konke lokho, uzophinde uthole ithuba ukudlula ngaphansi abadumile English Channel.
Uma unquma ukuya, nangu info kancane oludingayo ngesitimela. Kuthatha azungeze ezine amahora ukufinyelela London nge isitimela. Kuyinto kancane isikhathi eside, kodwa njengoba abantu abaningi bahambe baye ezindaweni ezikude ngokulinganayo kusukela Amsterdam, ingaphezu nokwenzeka. Odinga ukukwenza is basheshe baqale futhi baphuze ukubuyela ngasekupheleni, futhi uyogcina esethole usuku lonke e-London.
2. esetshenziswa: Kuphi I Fairy Tale Ucala
Sonke siyazi ukuthi ubuhle Amsterdam ikakhulu amanga imisele yayo kanye izakhiwo. Nokho, ubuwazi ukuthi konke okukhona Bruges, Belgium? Ngemva kwakho konke, kuba Bruges Bayibiza Venice Yezilwandle North, hhayi Amsterdam!
Ngaphezu kwalokho, Bruges akukhona nje kuphela ukuthi konke lokho kodwa omunye the best inganekwane amadolobha wonke kulo lonke elaseYurophu. Lokho kwenza uhambo kukhona omunye izixazululo kangcono usuku lwakho uhambo kusukela Amsterdam.
Uma unquma ukuya Bruges, uzothola ithuba simangalele kwezinye zezakhiwo kakhulu amahle medieval wonke kulo lonke elaseYurophu. Futhi uma lokho akwanele, Bruges inama ezinye okumnandi kakhulu chocolate ezenziwe ngezandla!
Lapho uya kusukela Amsterdam Bruges, unga kalula hamba ngesitimela. Lonke uhambo kancane kakhulu, futhi kuzothatha amahora engaphansi kwemithathu ukufinyelela edolobheni imilingo.
Amsterdam Bruges Izitimela
3. The Hague: Akumele kukuphuthele!
Kuzo zonke usuku uhambo kusukela Amsterdam ungathatha, Hague ingenye okungafanele uphuthelwe. Isizathu esiyinhloko kuba yokuthi Hague ingenye lamadolobha amadala kakhulu ebalulekile Netherlands. Libuye omunye amahle kakhulu.
Omunye akufanele udinga ezinye izizathu ngokuvakashela. Nokho, uma ufuna ukwazi kabanzi, kufanele uqaphele ukuthi Hague liseduze kakhulu Amsterdam. I ngesitimela uthatha kuphela emhlabeni ngehora futhi kakhulu ezishibhile.
The Hague iyona lombuso kwa-Netherlands, ngakho ungalindela ukubona eziningi izakhiwo umxhwele. Umuzi futhi indawo International Court of Justice, okungenye Kumelwe nibone indawo.
Ekupheleni, lapho ufika Hague, qiniseka ukuvakashela Madurodam. It is miniature park uyoba kakhulu nakanjani adore.
4. Cologne: Kuvele Ngokuvamile Uphuthelwe Gem Of Germany
Germany iyizwe egcwele emadolobheni amaningi emangalisayo. Nokho, akuvamile abantu cabanga iningi lazo ngenxa yesizathu esisodwa osuku lwabo uhambo kusukela Amsterdam.
Yize kunjalo, Germany namanje kuwufanele ngokuvakashela. Lokho kunjalo ikakhulukazi uma unquma ukuya Cologne, i gem ngokuvamile ukhohliwe laseNtshonalanga Jalimane. Ubuhle idolobha amanga ku osebeni ngokulinganayo omangalisayo Rhine River. Ngaphezu kwalokho, Cologne enkabeni umnotho, isiko, nezokuvakasha laseNtshonalanga Jalimane.
Uma unquma ukuya kulo muzi elimangalisayo, kuzodingeka izinkulungwane zeminyaka yomlando ubunyoninco. Ngalo kanye maphakathi Umuzi uyizinhlangothi thempeli omkhulu. It ingenye kakhulu izindawo emangalisa yokukhulekela uzothola ukubona wonke kulo lonke elaseYurophu.
Into enhle mayelana Cologne wukuthi kuba amahora kuphela emhlabeni ezintathu kude nge isitimela. Ngakho, uma unquma ukuya khona uhambo usuku, uyofinyelela edolobheni Ngokuphazima kweso.
5. Usuku Lokuvakashela Ukuze Paris Kusukela Amsterdam: Yini More To Say?
Izincwajana zemininingwane uhambo kusukela Amsterdam eParis kwakuthatha isikhathi eside kakhulu. Nokho, njengoba of sekwephuzile, bona amahora emhlabeni zokugcina ezintathu kuphela, okwenza Paris indawo okuyiwa ephelele omunye wakho usuku uhambo kusukela Amsterdam.
Famous for art yayo iminyuziyamu, izakhiwo, kanye cuisine, Paris kuyinto uya khona lowo alidingi isingeniso. Kuncane ishiwo lokhu umuzi odume ukuthi ungekwazi romanticize noma ukukuyenga.
Kusukela Eifel Tower Versailles, Paris ligcwele phama izindawo ukuvakashela nezinto ukwenza. Umuzi ukukhanya iyona uya khona ethandwa kakhulu emhlabeni wonke, futhi sonke siyazi ukuthi kungani. Ngakho, musa ukuchitha lwakho lokufunda isikhathi ngakho futhi nje iya khona!
Lezi ezinhlanu engcono usuku uhambo kusukela Amsterdam uqiniseka ukwenza uhambo lwakho ongenakulibaleka, futhi ngoba bonke bangabakhulekeli kalula efinyeleleka ngesitimela, wena nasizathu hhayi ukuvakashelwa uma wena eYurophu!
futhi, uma unemibuzo, ukhululeke ukuthintana Londoloza Isitimela!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Kuhle Day Uhambo Kusukela Amsterdam ngu zemininingwane” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-amsterdam%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Daytrips europetravel Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelamsterdam imvuenline travelengland travelgermany travelnetherlands travelparis